Emirates inopemberera Zuva reRusununguko rweJordani kuyambuka nendege dzayo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Emirates inopemberera Zuva reRusununguko rweJordani kuyambuka nendege dzayo
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Joridhani Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa UAE Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Emirates yanga ichibhururuka ichienda kuJordani kubvira 1986, uye ichange ichipemberera kusvitsa kwayo makore makumi matatu nemashanu gore rino munyika.
Emirates ichave ichipemberera Jordan's 75th Independence Zuva zvine mutsindo gore rino
Vatengi vanoongorora ndege dzavo dzeEmirates kuQueen Alia International Airport vanowana zvigadzirwa zvekuratidzira nyika yavo
Emirates nhasi inoshanda nendege dzezuva nezuva pakati peAmman neDubai vachishandisa iconic A380
Emirates yakazivisa kuti ichave ichipemberera Jordan's 75th Independence Day zvine mutsindo gore rino, apo nyika inocherekedza chiitiko chayo chegore guru. Vatengi vanokwira yavo Emirates nendege kubva musi wa 24-26 Chivabvu dzinogona kutarisira kubata kune nhanho nhanho dzese dzerwendo rwavo, kubva kunzvimbo dzakafemerwa mundiro, kuenda kune yepasi kurangarira chiitiko chekupinda-mukati, nezvimwe zvakawanda.
Vatengi vanobhururuka panguva yeZuva reRusununguko vachakwanisa kunakidza mansaf seimwe yemidziyo mikuru iri kupihwa mukati mezvikamu zvese. Kutenderedza kudya kwavo, kirimu-yakazadzwa knafe inozopihwa pabhodhi, yeiyo yakanaka inotonhorera nyowani kune yavo yemunharaunda yekubika ruzivo. Cabin Crew ichave iri kugoverawo yakasarudzika chiziviso paneboard services pa25th yaMay. Vatengi vanoongorora ndege yavo yeEmirates kuQueen Alia International Airport vanowana zvigadzirwa zvekuda nyika pamasokisi avo etiketi pamwe nekutarisa-mukati skrini.
Mohammad Lootah, Area Manager Jordan akati: “Tinofara kupemberera Jordanian Independence Day nevatengi vedu, uye tashanda nesimba kuti chiitiko ichi chiwedzere kuva chakakosha kwavari gore rino. Isu tiri chikamu chenharaunda yese yatinoshandira, uye Emirates inodada nekuita basa rekukudza mabhizinesi, kuchinja hupenyu uye kugadzira mikana muJorodhani nekupa kunatsiridzwa kubatana uye chigadzirwa chepamusoro. Emirates ine midzi yakadzika muno muJoridhani uye tinogara tichitsvaga nzira nyowani dzekushandira imwe yemisika yemuno ine simba. "
Emirates yanga ichibhururuka ichienda kuJorodhani kubvira 1986, uye ichave ichipemberera yayo makumi matatu neshanuth chirangaridzo gore rino munyika. Emirates yakagadzira mashandiro ayo muJoridhani, ichipa kubatana kwakanyanya kune vatengi vayo nekusimudzira masevhisi ayo kunyika, uye nhasi uno inoshanda nendege dzezuva nezuva pakati peAmman neDubai dzichishandisa iyo inomiririra A380, uye ichave ichisimudzira nendege kumabasa ezuva nezuva kutanga kubva muna Chikunguru. .